Football Khabar » कोउटिन्होको खुट्टाको शल्यक्रिया सफल : कहिलेसम्म मैदानबाहिर ?
कोउटिन्होको खुट्टाको शल्यक्रिया सफल : कहिलेसम्म मैदानबाहिर ?
ब्राजिलका फुटबलर फिलिपे कोउटिन्होको खुट्टाको अप्रेसन सफल भएको छ । हाल जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखबाट लोनमा खेलिरहेका उनको खुट्टाको समस्याका कारण शल्यक्रिया गर्नु परेको ब्राजिलियन मिडियाले जनाएका छन् ।
अब कोउटिन्हो कम्तीमा ६ देखि ७ हप्तासम्म मैदानबाहिर हुनेछन् । कोरोनाका कारण स्थगित फुटबल सुचारु भए उनले सुरुआती केही खेल गुमाउनेछन् । जर्मन लिग बुन्डेसलिगा मे ९ तारिखबाट खेलाउने तयारी छ । बार्यन हाल अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।
कोउटिन्हो गत समर सिजनमा बार्सिलोनाबाट एक सिजनको लोनमा बार्यन पुगेका थिए । उनले यो सिजन हालसम्म ३२ खेलबाट ९ गोल गर्दै ८ गोलमा असिस्ट पूरा गरेका छन् । यो सिजनपछि उनी बासिलोना फर्किनेछन् । तर, उनलाई बार्सिलोनाले बेच्ने तयारी गरेको चर्चा छ ।
प्रकाशित मिति १३ बैशाख २०७७, शनिबार १९:५४